टुक्रे योजना र वितरणमुखी कार्यक्रम नबनोस् | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
टुक्रे योजना र वितरणमुखी कार्यक्रम नबनोस्
Published On : २३ भाद्र २०७६, सोमबार ०९:३४
अहिले नेपालमा तीन किसिमको सरकार छ । राष्टिूय गोरवका योजनाहरु बनाउने संघ सरकार, जिल्लास्तरका योजना तथा कार्यक्रममा काम गर्ने प्रदेश सरकार र स्थानीय स्तरको आवश्यकता टार्ने गरी योजना बनाएर काम गर्न स्थानीय सरकार छ ।
तीन वटा सरकारले गरेको कामले देशमा सघन विकास हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । यो शासन ब्यबस्थाकोे सबल पक्ष यही हो । तर यसका दुर्वल पक्ष पनि छन्, त्यो हो, टुक्रे योजना तथा कार्यक्रम गरेर पैसा सिध्याउने, वितरमुखी कार्यक्रम गरेर आफन्त पोस्ने ।
यी दुवै काम जनमुखी छैनन्, देश र जनताको हितमा छैनन् । त्यसैले यस्ता कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।
तर स्थानीय होओस् वा प्रदेश सरकार टुक्रे योजना गरेर कार्यकर्ता लालनपालन गर्न लालयित हुन्छन् । वितरणमुखी कार्यक्रम गरेर कार्यकर्ता पालनपोषण गर्न उद्दत हुन्छन् ।
यसको नकारात्मक प्रभावका बारेमा अधिकांशले बुझेका हुन्छन् । बुझेर पनि बुझ पचाएर लाभ लिइरहेका हुन्छन् । त्यसैले यसलाई रोक्न गाउँठाउँका पढेलेखेका शिक्षित, सभ्य वर्ग सचेत हुनुपर्छ । वितरणमुखी कार्यक्रम निरुत्साहित गर्नु उनीहरुको स्थानबाट पहल गर्नुपर्छ । त्यस्तै साना योजनाको कनिका छर्ने पं्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सचेत बर्गहरुले पहल गर्नुपर्छ । जनचेतना जगाएर वा लबिङ गरेर अहिलेको समयमा साना योजना नबनाउन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
सुत्केरीलाई माइतीको कोशेली लोकप्रिय कार्यक्रम
मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री छँदा ७५ बर्ष कटेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक एकसय रुपैयाँ भत्ता दिने घोषणा
अनाथ बालबालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर दन्त उपचार सेवा सुरु
गोरखा बसपार्कमा रहेको संगम मेडिसेल्सले मानव सेवा आश्रमका अनाथ बालबालिकाको दाँत चेकजाँच गरेर दन्त
गोरखा बिभिन्न कोणबाट महत्वपूर्ण छ । विशेषगरी इतिहासको दृष्टिकोणले गोरखाको जति महत्व छ, अन्य जिल्लाको